प्रचण्ड संघीयता समाप्त पार्ने खेलमा ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
प्रचण्ड संघीयता समाप्त पार्ने खेलमा !
काठमाडौं, ३ चैत । केही दिन अगाडी नेकपा एमालेका नेताहरुले मधेसी मोर्चाका नेताहरुको रगतमा नेपाली पन छ कि छैन जाँच्नु पर्ने बताएका थिए । राष्ट्रियताको सवाल उठाउँदै एमाले नेताहरुले मधेसी मोर्चाका नेताहरु नेपाली हुन की होइनन् भन्दै प्रश्न गरेका हुन । एमाले नेताहरुको यो प्रतिकृयापछि मधेसी मोर्चाका एक नेताले यसको जवाफ फर्काएका छन् ।
एबीसी न्यूजको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा कुरा गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले ठूला दलका नेता भनौदाहरुको शरीरमा भारतीय रगत बगिरहेको आरोप लगाए । उनले भने ः हामीलाई भारतीय देख्ने ? हामीसँग सबै लिष्ट छ, आफुलाई राष्ट्रवादी देख्ने नेताहरुको शरीरमा भारतीय रगत बगिरहेको छ । भारतीय दुतावासले नस्लवादी दलका नेहरुको शरीरमा भारतीय रगत फेरिदिएको । त्यति मात्र होइन, भारतीय पैसामा नेताहरु जिविका चलाइरहेका छन्, ल अब भन्नुस्, कसको रगत नेपाली र कसको भारतीय ?
सरकारसँग भर्खरै सम्बन्ध बिच्छेद गरेको मधेसी मोर्चाका नेता यादवले वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन् । अध्यक्ष यादवले वर्तमान सरकार संघीयता समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रतिगामी कित्तामा सरेर संघीयता समाप्त पर्ने खेलमा लागेको उनको आरोप रहेको छ । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिपेक्षता बिरोधी तत्वसँगको साठगाठमा लागेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आजसम्मका उपलब्धी समाप्त पार्ने खेलमा लागेको उनले आरोप लगाए ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाच घोषणा गर्नु र प्रतिगामी तत्वहरुसँगको साठगाठमा लाग्नु संघीयता समाप्त पार्ने पहिलो खेल रहेको उनको तर्क छ । हजारौ जनताको बलिदानीपछि प्राप्त उपल्धी समाप्त पार्नेगरी घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्न नदिने उनले चेतावनी दिए ।
नेता यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता सँगै मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा होमिएकाले फेरी नाकाबन्दी दोहरीने समेत चेतावनी दिए । वर्तमान सरकारले मधेसी जनतामाथी घात गरेको भन्दै अध्यक्ष यादवले अब निर्णायक आन्दोलन सुरु भएको बताउँदै आन्दोलनका कारण फेरी नाकाबन्दी दोहोरीने चेतावनी दिनु हुन ।
वर्तमान सरकारसँग सम्बन्ध टुटेसँगै फरक प्रकृतिको आन्दोलन सुरु भएको भन्दै अध्यक्ष यादवले अबको आन्दोलनले सर्वतमान राज्यसत्ताको चरिपत्र नै परिवर्तन गर्ने दावी गरे ।